Azonao vakiana ny lahatsoratra rehetra raha ... ... Martech Zone
Azonao vakina ny lahatsoratra rehetra raha…
Alarobia 23 Janoary 2008 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ny tale jeneraliko dia nanakarama loharano tapa-potoana hamokarana ilay kopia ara-barotra ilainay rehefa mametraka ny tranokalanay vaovao marketing. Ilay olona nokaramaina dia manana lalam-barotra matanjaka fa tsy lalam-barotra amin'ny Internet - azoko antoka fa ho mora raisin'izy ireo izany (antenaiko izany!).
Mba hanomezana tari-dalana vitsivitsy dia nomeko loharanom-pahalalana lehibe momba ny atiny fanoratana ny mpanoratra. Iray amin'ireo loharanom-pahalalana ireo bilaogin'i Junta42's Top Marketing Marketing. Tsy mbola nojereko daholo ireo bilaogy tamin'io lisitra io fa misy fahatokisana nomena ahy hitako CopyBlogger eo! Handinika ireo tranonkala hafa aho atsy ho atsy.
Torohevitra momba ny fanoratana kopia ho an'ny tranokalanao na bilaoginao:
Raha tsy misy resaka lavitra dia ireto misy toro-hevitra ambony indrindra amin'ny fanoratana. Tokony hanomboka amin'ny filazako aho fa meloka noho ny tsy fampiasako ireo tamin'ny lahatsoratry ny bilaogiko rehetra. Manantena aho fa hanao asa tsara kokoa noho ianao ianao. ianao dia mioty ny valisoa!
Lohateny mahasarika - fisafidianana lohateny izay tsy toa gazety fa, tampony kosa ny fahalianan'ny mpamaky rehefa mitsambikina amin'ny valin'ny motera fikarohana izy ireo ary manadino ireo RSS RSS.
Votoatiny Chunking - ny toerana fotsy no sakaizantsika. Raha te hamaky ny kopiao… na tsy azo esorina… ialao ireo andalana nianaranao nanoratra tany amin'ny oniversite. Safidio kosa ny lohateny mahery na lohateny kely, araha andalana iray na fehezanteny matanjaka 1 na 2. Mampiasà lisitra misy bala na laharana.
Rohy malalaka - Rohy anatiny ny lahatsoratrao manokana izay mampiasa teny lakile izay hitarika fivezivezena. Ampifandraiso ihany koa ny ivelany, ny fampiroboroboana bilaogy hafa izay hamerina anao indray andro any. Manamafy ny fanondroana ny motera fikarohana anao izany, manampy amin'ny fitazonana ireo mpitsidika eo amin'ny tranokalanao lava kokoa, ary hampiroborobo ireo bilaogy hafa - hampiharihary ny mpihaino anao ho azy ireo sy ny mifamadika amin'izany.
Mampiasà teny lakile sy fehezanteny lehibe - ny fahatakarana izay tadiavin'ny olona amin'ny tranonkala dia fanalahidin'ny fahatakarana ny fomba hahitana ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny motera fikarohana. Ny fampiasana teny lakile sy andian-teny manandanja mandritra ny atiny dia hanampy amin'ny fitaterana an'io atiny io ao amin'ny motera fikarohana ary hitondra ny olona mankamin'ny tranokalanao izay nitady izay nomenao.
Ny pejy REHETRA dia pejy fidirana - Matetika ny mpivarotra tranonkala dia miresaka momba ny pejy fandraisana ary fantatra malalaka izy ireo amin'ny toerana itarihanao mpitsidika amin'ny mailaka na fampiroboroboana. Na izany aza, satria ny votoatin'ny tranokalanao na ny bilaoginao dia (antenaina) atokana tsirairay amin'ny motera fikarohana, dia midika izany fa ny pejy rehetra izay atokana isam-pejy dia lasa pejy fipetrahana Izany dia milaza fa zava-dehibe ny itondranao ny pejy tsirairay toa ny mpamaky mbola tsy nankany amin'ny tranokalanao talohan'izay. Indrindra miaraka amin'ny bilaogy! Latsaky ny 10% amin'ireo mpitsidika vaovao ahy dia tonga ao amin'ny bilaogiko amin'ny alàlan'ny pejin-tranoko.
Tamin'ny taon-dasa dia nanoratra aho hoe: Atsaharo ny fanoratana ho an'ny milina fikarohana. Niorina mafy tamin'ny fanoherana ny fanoratanao ny atiny ho fanintomana ny milina fikarohana fotsiny satria hamono ny mpamaky izany. Mijoro eo akaikin'io lahatsoratra io aho; na izany aza, mino aho fa misy fifandanjana rehefa manoratra ny atiny ianao.
Raha afaka manoratra ny atiny ianao mba hahitan'ny mpamaky azy, ankafizo, ARY hisarika ny sain'ny motera fikarohana hitanao ny fandanjana tonga lafatra.
Tags: addokam-barotradoka amin'ny sora-baventychrisbrossdoka famoronanagoogle webmasterweb designfanatsarana ny tranokalatranonkala fanatsaranafandrindrana tranonkala
Rehefa mi-tweet amin'ny Twitter miaraka amin'ny Snitter aho…
27 Jan 2008 amin'ny 10:51 PM
Misaotra an'ireo torohevitra ireo,
Tsy noeritreretiko mihitsy ny hitsabo ny pejy rehetra toa ny pejy fandraisana.
Mahatonga saina fa tsy ny rehetra no miditra avy amin'ny pejy fandraisana.